Sailthru: Ebuli, Akpaka na-anapụta | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 17, 2013 Tọzdee, Disemba 17, 2013 Douglas Karr
Anyị na-abanye na-adọrọ mmasị afọ mgbe ọ na-abịa na nnukwu data na ahaziri. Nyiwe dika Sailthru nwere ike hazie ugboro ole na isiokwu nke ozi ị na-eziga site na ekwentị ma ọ bụ email - wee hazie ọdịnaya nke saịtị ahụ onye ọrụ ahụ na-adabere na ya. Edeela m ogologo oge na njedebe nke oge a nchịkọta bụ na ọ na-ewelite ajụjụ ndị ọzọ, ọ bụghị azịza n'ezie. Nhazi nhazi nke onwe dika Sailthru na agbanwe agbanwe - weghachite data nyocha ma me ka ihe omuma nke onye obia ba uba ego… ma mee ya na ntaneti site na izipu ozi na web.
Ọ bụ ezie na nhazigharị a na - eweta ahụmịhe onye ọrụ dị elu na ntụgharị dị elu, achọrọ m ịma etu ọchụchọ na mmekọrịta mmadụ ga-esi nweta. Ọ bụrụ na m nwere ahụmịhe nkeonwe… Ohere bụ na Googlebot adịghị. Ma ọ bụ ọ bụrụ na m kọọrọ m ahụmịhe nke onwe, ị ga-enweta otu ahụ? Ikekwe, ma ọ bụ ikekwe ọ bụghị. Anyị ga-ahụ… mana maka ugbu a, nhazi nyiwe na-anya njigide dị egwu na ntụgharị. O yiri ka ụbọchị standalone email ahịa ikpo okwu dị n'azụ anyị!
Site na ịwakpo njikọ miri emi, nyiwe dịka Sailthru egosila na ị ga-abawanye mkpokọta ego. Nke a bụ otu:
Mkparịta ụka dị mkpa na nke kpatara n'oge - Sailthru Smart Strategies ngwọta na-enye gị ohere ịtọ ọkaibe ntapu mkpọsa emere iji tinye ndị ọrụ ochie n'ọrụ na-akpaghị aka, mezue ịzụrụ ihe ọzọ, iweghachite ụgbọ ala, nye ikpe n'efu, wdg n'oge kachasị mma.
Nhazi ọdịnaya na ndụmọdụ - Sailthru's proprietary technology tracks saịtị, email, ekwentị mkpanaaka, na omume na-elekọta mmadụ iji zụlite profaịlụ mmasị maka ndị ahịa ọ bụla pụrụ iche. Site ebe ahụ, ha nwere ike jupụta na nkwukọrịta gị niile site na iji ọdịnaya na ngwaahịa ndị dị mkpa.
Gbasaa nkewa maka ahịa ezubere iche - jiri Sailthru wee wuo ndi otu ihe omuma di omimi, nke di omimi dabere na otutu data omume di maka ndi ahia ha.
Nghọta na njikwa ị nweta ego - revenuekpụrụ ego Sailthru na metre peeji nke na-enye ndị na-ere ahịa ume na ndị otu nchịkọta akụkọ / nchịkọta akụkọ iji bulie mkpọsa ahịa ha na nkwalite dabere na ezigbo dollar karịa naanị imeghe ma ọ bụ pịa.
Tags: machiiniNyefeedịkwuo revenuenjikarịchaebulikeonweOgbala
Top Social Media Mejọọ nke 2013